I-LucidPix Start Start Guide - Ungayisebenzisa Kanjani iLucidPix
Sisebenze kanzima ukwenza iLucidPix ukuthi ibe lula kakhulu ukusebenzisa indalo yezithombe ze-3D, ukuhlela nokwabelana ngohlelo lokusebenza kuyatholakala ku-iOS ne-Android. Izeluleko ezilandelayo kanye namaqhinga avela kule mhlahlandlela wokuqalisa osheshayo azokusiza ufunde ukuthi ungayisebenzisa kanjani uhlelo lwethu lokusebenza, ukuvumela ukuthi ube yi-LucidPix pro in no time!
Ukushesha Nav: Thwebula • Ngena ngemvume • Gallery • Dala isithombe se-3D • Ukuqothuka kwesithombe • Yenza ngokwezifiso isithombe sakho se-3D • Yabelana ngesithombe sakho se-3D • Kujabulele
Icebo # 1: Landa i-LucidPix
Ungalanda futhi ufake i-LucidPix mahhala Isitolo se-Apple App futhi Isitolo se-Google Play.
Uhlelo lokusebenza luzosebenza kuma-smartphones amaningi atholakala namuhla, kufaka phakathi i-iPhone 6 noma okungcono, ukusebenzisa i-iOS 11.1 noma okusha, namadivayisi we-Android asebenzisa i-Android 5.0 noma entsha. Uma kwenzeka ungeyena umuntu we-tech: uma uthenga ifoni yakho eminyakeni engu-5 edlule, amathuba ukuthi uLucidPix azosebenza kuyo.
Ithiphu # 2: Ngena ngemvume
Ngokungena ngemvume kuLucidPix, uyakwazi ukugcina zonke izithombe zakho ze-3D endaweni eyodwa, uzibuke ngocingo lwakho noma kuwebhusayithi yethu, futhi ubambe iqhaza eLucidPix 3D Community ngokuthanda, ubeke amazwana futhi wabelane ngezithombe ezinhle ze-3D nabangani kanye umndeni. Njengamanje sisekela ukungena kwe-Facebook ne-Google ukufinyelela uhlelo lwethu lokusebenza, okusho ukuthi akudingeki ukuthi wakhe i-akhawunti entsha ukuze usebenzise uhlelo lokusebenza.
Ngena ngemvume kuLucidPix
Uma ukhetha ukungangeni ngemvume, ungaqhubeka usebenzise iLucidPix ngokukhetha i Qhubeka njengesimenywa inketho.
Ithiphu # 3: Bheka igalari yeLucidPix
Ngemuva kokungena ngemvume kuhlelo lokusebenza, uqondiswe kuGalidPix Gallery. Cabanga ngalokhu njengekhasi lakho lasekhaya, njenge-TikTok yakho yekhasi noma ikhasi lakho le-Instagram. Yilapho lapho ungabona khona okuthunyelwe okudumile okwabiwe abanye abasebenzisi beLucidPix nabantu obalandelayo, nalapho ungabelana khona ngendalo yakho ye-3D.
Igalari ye-LucidPix 3D
Ngasinye salezi zithombe ze-3D singase sithwetshelwe ukubuka isikrini esigcwele. Qiniseka ukuthi ushukumisa ifoni yakho ukuze ubuke yesehlakalo kuyo yonke imikhawulo emithathu.
Zizwe ukhululekile like isithombe se-3D bese ulandela umenzi. Ungahle uhlele futhi wabelane ngalezi zithombe ze-3D nabangane nomndeni ngokuthepha share Isithonjana ngemuva kokuthepha esithombeni ukulayisha kumodi yesikrini esigcwele.
Ithiphu # 4: Dala isithombe sakho sokuqala se-3D
Kulula kakhulu ukudala izithombe zakho ze-3D eLucidPix. Okokuqala, thepha isithonjana sekhamera ezansi kwesikrini ukuze ushintshe kumodi yokudala.
Uma usunemodi yokudala, ukhonjiswa ukuqoshwa kwekhamera kwefoni yakho yezithombe zakamuva ongakuguqula ku-3D ngeLucidPix, noma unghethe ukuthatha isithombe esisha ngokuthepha ku isithonjana sekhamera emhlophe / eluhlaza okwesibhakabhaka ngakwesokunxele phezulu kwesikrini.
Ukwenza isithombe usuvele uthwebule i-3D, umane nje thepha esithombeni, ezizolayisha isithombe esigcwele. Uma isithombe sibukeka sisihle, thinta Khiqiza isithombe se-3D inkinobho ukuyenza i-3D.
Ngenye indlela, ungathwebula isithombe sakho se-3D ngokuthepha isithonjana sekhamera ngakwesobunxele phezulu kweqolo yekhamera, nokudubula isithombe njengokujwayelekile.
Awunasiqiniseko sokuthi yini ebukeka kahle? Bheka okuthunyelwe kwethu kwebhulogi mayelana ukuthi ungaziqamba kanjani kangcono izithombe ze-3D.
Ithiphu # 5: Shiya isikhala esizungeze isihloko sesithombe sakho
Ngesikhathi senqubo yokuguqulwa kwe-3D, isithombe sitshekelwa kancane, okusho ukuthi imiphetho yesithombe ingabukeka inqunywe umlomo. Senza lokhu ukuze ubheke isithombe kuwo wonke amabanga amathathu. Uma ubheka nxazonke, izinto ezikude zihamba esikrinini ngaphezu kwezinto ezisondele kakhulu, ngakho-ke zidinga isikhala esithe xaxa sokuhamba eceleni nangaphezulu nangaphezulu, yingakho ukunqampuna. Uma singakwenzanga lokhu, uzobona imiphetho yezithombe engathandeki ngaso sonke isikhathi.
Ungakhathazeki! Njengoba nje ungenza ngelensi entsha kukhamera yakho ye-DSLR, konke okudingeka ukwenze lapho ukudubula uLucidPix ukwenza isithombe sakho ngendlela ehlukile. Kulokhu, engeza isikhala esengeziwe esiseduze nesihloko sakho. Uzoba kuhle ukuhamba kuphela nalolo shintsho oluncane lokufaka.
Qinisekisa ukudubula izithombe zakho ngakho-ke akukho okubalulekile endaweni emngceleni omhlophe
Icebo # 6: Kwenze okwakho ngeLucidPix
I-LucidPix yenza okungaphezu kokudala nje ukujula kwezithombe ze-3D, futhi ikuvumela ukuthi uhlele ukubenza babe abakho. Isivivinyo ngokungeza ehlunga njengo-Instagram ukushintsha ukubukeka nokuzwakala kwesithombe, kwenze ukuba kube yilapho kukhulunywa khona ngokungeziwe Umbhalo we-3D ne-emojis atop isithombe sakho.
Isampula yombhalo we-3D ngesithombe se-3D
Umbhalo wakho we-3D ungenziwa ngokwezifiso ngokucindezela nangokusondeza usayizi, ukuwasonta ngeminwe emibili ukuze ujikeleze, ukuhudula ngomunwe owodwa ukuze ubeke kabusha, nangokuthepha okusaqanda okumnyama phezulu kwesithombe ukushintsha izitayela zefonti.
Qiniseka ukuthi ugcine umbhalo wakho nama-emojis kude nemiphetho yesithombe, njengoba inqubo yokuguqulwa kwe-3D ivame ukufihla ingxenye encane yesithombe ohlangothini ngalunye.
Ngemininingwane engaphezulu ngombhalo we-3D, ngicela ubheke lokhu okuthunyelwe kwebhulogi.
Ithiphu # 7: Yabelana ngendalo yakho
I-LucidPix iyindlela yokwabelana ngezithombe zakho ze-3D, ikunika izindlela zokwabelana ezilula cishe noma yiliphi ithuba lokwabelana. I-LucidPix okwamanje isekela ukwaba kuzingxenyekazi ezilandelayo, nokuningi okusendleleni:
Facebook (njengesithombe sendabuko se-3D)
Ngaphezu kwamapulatifomu angenhla, iLucidPx ingashesha futhi kalula thumela izithombe zakho ze-3D njengama-GIF e-animated namavidiyo e-mp4 yokwabelana kuwebhu noma kunoma iyiphi enye imithombo yezokuxhumana noma yesikhulumi semiyalezo.
Lapho wabelana, ungakhetha ukuthi indalo yakho ye-3D iboniswa kanjani, kufaka phakathi ijubane nesitayela sokuhamba kwekhamera. Hlola okukhethwa kukho ngokuthi ngokuthepha phakathi kwe-Orbit, Zoom, Slide and Square ukubona ukuthi yini ebukeka kahle kakhulu ngesithombe sakho Sebenzisa isilayida esisheshayo ukwenza ukunyakaza kuphelele. Uma usujabule, kufanele uthephe Gcina ividiyo ukuyigcina kukholi yakho yekhamera.
Uma ufuna ukwaba indalo yakho nomhlaba, mane uslayida yonke indlela eya kwesobunxele lapho wabelana futhi ukhetha Yabelana kuGalari.
Khetha inketho ye-Gcina ngakwesokunene ongayihlanganyela kwiGalidPix Gallery.
Ngenye indlela, ungabelana ngokuqondile kusuka ekhasini lasekhaya lohlelo lokusebenza, elibizwa ngeLucidPix Gallery. Lapho, thepha plus uphawu ngakwesokudla phezulu kwesikrini ukuze wabelane ngendalo yakho ye-3D kugalari.
Thepha isithonjana sokuhlanganisa ukwaba okudala kwakho
Ngemuva kokubamba isithonjana sokwabelana ngegalari, uhlelo lokusebenza luzolayisha ukubuka kuqala kwesithombe sakho se-3D, kanye nendawo yokwengeza incazelo emfushane. Gcwalisa lesi sigaba, futhi uqiniseke ukuthi Kubonakala emphakathini Inketho ikhethiwe, ukuze abanye babone futhi bathande indalo yakho. Uma uthepha Thumela isithombe sakho sizothunyelwa kuLucidPix ukuthi sidingidwe, bese sengezwa kugalari yekhasi lasekhaya ukuze bonke babuke, bathande futhi babelane.
Qiniseka ukuthi wengeza incazelo emfushane futhi wenze isithombe sakho sibonakale emphakathini
Ngemuva kokuthepha Thumela uzobona encane ngiyabonga ezansi kwesikrini okuqinisekisa impumelelo.
Ithiphu # 8: Zithokozise!
I-LucidPix imayelana nokuzijabulisa nokuhlola umhlaba ku-3D. Ngakho-ke phuma uye lapho futhi usize umhlaba ukuba ubone kahle lokho okubonayo ngesithombe se-3D kusuka kuLucidPix!
Siyethemba lo mhlahlandlela wokuqalisa osheshayo ukukusize ukuthi uvuke ugijima neLucidPix. Uma usenemibuzo noma ongabelana ngakho ngempendulo, sicela ukhululeke ukusebenzisa kwethu ikhasi lokuxhumana ukungena ukuxhumana.
Namanje Impilo Photography ku-3D →← Amathiphu we-Great Animal Photography